Posted by Tranquillus | May 30, 2020 | Luqadda shisheeye
Maxay ka dhigan tahay barashada Shiinaha faa iidada leh? Markaan idhaahdo Shiine waxtar leh, waxaan ula jeedaa waa inay lahaadaan weedho iyo ereyo. Kuwa kuu oggolaanaya inaad ku dhex marto Shiinaha. Waxba kaa hor istaagi maayo intaas ka dib. Si aad u bilowdo barashada nashqadaynta Shiinaha. Kadib sii wad, oo leh 400 oo shibbane ee Pinyin. Laakiin haddii ujeeddadaadu tahay inaad awood u yeelato inaad ereyo kooban ku dhaafsato macmiil. Maxaad ugu casuumi weyday qaxwo haddii uu booqanayo Faransiiska. Marka xaaladahan waqti ha iskaga lumin. Wax walba diiradda saar maqalka codka. Tani waa habka kaliya ee kuu oggolaan doona inaad noqoto mid lagu kalsoonaan karo muddada aad u gaaban. Adiga laftaada ayaa la yaabi doona natiijooyinka la helay. Marka waxaan kuu ogolaanayaa inaad qiyaasi karto dareenka asxaabtaada.
Baro Shiinaha, wax aan macquul aheyn?
Maya. Dhammaan xeerarka aad taqaanid oo ay ku adag tahay inaad xusuusato. Sida iskuxirka ficillada iyo go’aammadooda kaladuwan. Ama sidoo kale heshiisyada jinsiga iyo tirada. Waxaas oo dhan kuma jiraan Shiinaha. Markaad si fiican u baratay qaabka ereyga. Ma lihid su’aalo dheeraad ah oo aad isweydiiso. Qaabkeedu had iyo jeer wuu sii ahaanayaa Sharciga kama reeban. Laakiin dabcan luqad aan lahayn dhibaatooyinkaas oo dhan. Aad ayey ufiicantahay in run la ahaado. Haddaba aaway halxiraalihii Shiinaha? Waxaan dhihi lahaa 20% ku dhawaaqid iyo 80% qoraal.
Gaar ahaanshaha qoraalka Shiinaha
Sida loogu dhawaaqayo. Waxaad haysataa labaatan dhawaaq oo wanaagsan oo aan ku jirin Faransiiska. Laakiin dhibaatada si dhakhso leh ayaa loo xallin karaa. Dhinaca kale akhriska iyo qorista. Waxaan uga hadleynaa guud ahaan, tanina waxay ku jirtaa daraasadda aasaasiga luqad kasta. Xifdinta 1000-ka eray ee ugu caansan. Taasi waxay ka dhigan tahay xagga Shiinaha. Xusuusnow oo baro inaad sawirto mid kasta oo ka mid ah astaamaheeda. Ma aha wax aan caadi ahayn laba ama xitaa saddex sano ka dib. Qaarkood wax natiijo ah ma helaan. Marka waxaan kugula talinayaa hadaadan waqtiga u haynin waxaas oo dhan. Toos ugu tag fiidiyowga qeybta hoose ee maqaalka. Kadib si aad u sii wado silsiladaha Shiinaha ee cinwaan looga dhigay Faransiiska. Markaad gaadhay heer afeed oo lagu qanco. Markaas waad daryeeli kartaa inta hartay.
Kheyraad bilaash ah oo lagu barto Shiinaha
Khatarna ku ah inaan naftayda ku celiyo. Dunida xirfadleyda ah, kartidaada wicitaan-wade waxay u badan tahay inaysan cidna danaynaynin. Marka hore, hubi inaad haysato shandado afka ah oo kugu filan. Kahor intaadan ku quusin barashada-waqti qaadashada. Waa kuwan agabyo bilaash ah oo kaa caawiya inaad taas samayso.
Halkaas waxaad ku leedahay laba codsi oo bilaash ah oo kuu oggolaanaya inaad la qabsato ereyada Shiinaha ee ciyaarta iyo ku celcelinta.
Goobtani waa goobta ugu sareysa barashada Mandarin Shiine. Dhammaan ilaha, macluumaadka iyo aaladaha ayaa jira. Waa madal aad loo yaqaan. Waa udub dhexaad muhiim u ah tayada tayada leh.
Liiska 9000 oo xaraf oo Shiinees ah oo ay weheliso ku dhawaaqidooda. Iyo sidoo kale tusaalooyin badan oo ku jira xaaladda. (SOMALI)
Barashada Shiinaha waa fududahay!
In ka badan 90 fiidiyow oo gaagaaban dhammaan dhinacyada barashada Shiinaha. Naxwaha, ku dhawaaqida iyo eray bixinta.
Kanaalka YouTube ee xiisaha luqadda Aasiya. Mawduucu wuxuu inta badan diiradda saarayaa Shiinaha. Laakiin sidoo kale waxaa jira Jabaaniis. Ku dhowaad 30 oo macmiil ayaa raaca fiidiyowyadan. Ku filan in la yiraahdo waxay aad u xiiseeyaan bilow kasta.
YOYO - Xulashada taxanaha Shiinaha
Boqolaal iyo boqolaal saacadood oo fiidiyowyo leh oo leh ereybixin xirfadeed. Wixii maalin kasta lagu dhex gelayo Shiinaha iyada oo aan la safrin
Baro Shiinees waxtar leh - Qaali wax ku ool ah oo bilaash ah May 30th, 2020Tranquillus
horeXaraashka tayo sare leh ee Excel, wax barashada lagu barto oo aan lahayn halista qaladaadka.
socdaBaro Ruush si bilaash ah oo dhakhso leh